ဆဲလည်းဆဲနိုင်ကြပါပေ့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ဆဲလည်းဆဲနိုင်ကြပါပေ့။
Posted by ခင္ခ on Jul 14, 2012 in Society & Lifestyle | 13 comments
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်ပြီးဆောက်နေတဲ့ ဟိုတယ်စီမံကိန်း အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းခွင်ကို ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့ရယ် သူငယ်ချင်းနဲ့လည်းတွေ့ရအောင်ရယ် တစ်နေ့ညနေပိုင်း ရောက်သွားတော့ အဆောက်အဦးရဲ့ဒုတိယထပ် ကြမ်းခင်း ကွန်ကရစ် လောင်းနေတာနဲ့ အဲဒီစလပ်ပြင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း ကွန်ကရစ်လောင်းနေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပန်းရံလုပ်သား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေ လုပ်ဆောင်နေတာကို ငေးမောကြည ့်နေတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းကလည်း ကြမ်းခင်းကွန်ကရစ်လောင်းတာ ပြီးတော့မှာမို့ခဏထိုင်ပါအုံးဆိုလို့ပါ။ ပြီးမှလ္ဘက်ရေဆိုင်လေးထိုင် စကားပြောကြမယ်ပေါ့။
အဲဒီမှာ ပန်းရံဆရာ(သူတို့အခေါ်ပန်းရံခေါင်းပါ)က သူလက်အောက်က အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမ တွေကို အော်ဟစ်ကာပြောဆိုခိုင်းနေတာ မရပ်မနားဘဲ တော်တော်လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သလို ထောင့်စေ့အောင်လည်း ကြည့်တတ်ပြောတတ်ပါတယ် အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု့ကတော့ ခဏရောက်ပြီး ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော်တောင်ချီးကျူးမိပါတယ်။တစ်ခုဘဲ သူ့မှာပြောစရာရှိတာ သူပြောဆိုခိုင်းတဲ့ စကားရပ်တိုင်းမှာ ဘာလိုလိုမှိုလိုလိုတွေရော၊ အမေနှမ ရိုင်းဆိုင်းစွာပေးစားတဲ့ အသုံး အနှုန်း တွေရော၊ သူ့ပိုင်ပစ္စည်းနမ်စားအသုံးနှုန်းရောစုံလင်စွာပါဝင်တဲ့ အဆဲပေါင်းစုံပါဝင်နေတာပါဘဲ။ (အဆဲအသုံးအနှုန်းများကိုတော့ စာဖတ်သူများကိုလေးစာတဲ့အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထဲ့မရေးတာ ခွင့်လွှတ်ပါ) ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအင်ဂျင်နီယာကို ခင်ဗျား ပန်းရံဆရာက အတော်ဆဲလည်းဆဲနိုင်တယ်နော်လို့ ကောက်ချက်ချပြီးပြောလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘဲ သူငယ်ချင်းကလည်း ဆဲတာတော့ပြောမနေနဲ့ ဆိုဒ်ကိုသူ့စီးလာတဲ့ စက်ဘီးရပ်ပြီး ရောက်ပြီဆိုတာ တွေ့တဲ့သူကိုခေါ်တာ ဟိုနှမ(—–)။ဟိုအမေ(—-)။နဲ့တိုင်းတွာပြီပြောဆို စတော့တာဘဲ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဟိုတယ်ဆောက်တဲ့သူဌေးက ငါ့ကိုဘာပြောလည်းသိလား မင်းဆိုဒ်က မိုးလင်းလို့အလုပ်စတော့ မယ်ဆိုရင် အဆဲပရိတ်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းစတယ်တဲ့။ ငါ့မှာအားနာ လိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ ဒါကြောင့် သူ့ကိုကြုံတိုင်းလည်းပြောတယ် မဆဲပါနဲ့ဆိုတာလဲ ပြောခဏ ဘဲကွာ၊ အလုပ်ကျတော့လည်း လှည့်ကြည့်စရာမလိုလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်တော့င့ါလည်း သည်းခံရင်းလက်တွဲနေရ တာပေါ့ ကွာတဲ့။ ကျွန်တော်က သူအနေနဲ့သူ့လက်အောက်က အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမတွေဆိုပေမယ့် သူတို့ကိုဆဲဆိုပြီးခိုင်းတာကို အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်လို့ သူ့ကိုပြန်မပြောဘဲနေကြတာမဟုတ်လောက်ဘူး သူတို့ဝမ်းရေး၊နေရေးစတဲ့ အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်ကလေးဖြုတ်မှာ ကြောက်လို့ငုံခံကြတာများမှာပါ တစ်နေ့အဲဒါတွေ သူပြန်ပြီးခံစားနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောဖြစ်တော့။ သူငယ်ချင်း မင်းပြောတာမှန်တယ်သူအခု စလာပြီလေ သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ် အကြီးကောင် ကဒီနှစ်စပြီး သူငယ်တန်းမို့ကျောင်းထား ပြီလေ အဖေကအဆဲလေးနဲ့ပြောတာကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ကလေးကလည်း စကားပြောရင် အဆဲ လေးနဲ့ပေါ့။ ရပ်ကွက်ထဲ ကလေးအချင်းချင်း စော့ကြရင်း အဆဲလေးနဲ့ပြောတာဘာမှပြသနာ မတက်ပေမယ့် ကျောင်းကဆရာမက စာရေးတာမျဉ်းမတားလို့ ဆူတာကို (—)လိုမဘဲ လို့ သူပိုင်ပစ္စည်းနဲ့တိုင်းထွာဆဲလိုက်မိလို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက မိဘခေါ်တွေ့တော့ ပန်းရံဆရာ အမျိုးသမီး သွားတွေ့ ရပါရော၊ အဲဒီလိုတွေ့တာ တစ်ခါမကတဲ့အကြောင်း ပန်းရံဆရာပြောပြီး တစ်ခါတလေ မျက်ရည်ဝဲတယ်လေ သူ့သား ဆဲတာပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဆိုပြီးတော့။ ဒါပေမယ့်ပြောတုံးခဏဘဲ နောက်တော့လဲ မင်းကြားတဲ့အတိုင်းဘဲကွာတဲ့။ ဒါနဲ့ ကြမ်းခင်းကွန်ကရစ် လောင်းတာပြီးပြီမို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်သွားဖို့ စလပ်ပြင်ကအောက်ကို ဆင်းခဲ့ကြပါရော။
အဲဒါလွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်ခန့်က တွေ့ကြုံမှု့လေးပါ။ ဒီနေ့ဘာလို့ဒီအကြောင်းကိုပိုစ့်ရေး ဖြစ်လဲဆိုတော့ မနေ့ညကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အင်ဂျင်နီယာဖုန်းဆက်လာတယ် အဲဒီပန်းရံဆရာ ဆုံးသွားပြီတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်က သူဆဲတာကိုမခံနိုင်တဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်က နံရံ အုတ်ခဲစီရင်း အဲဒီအုတ်ခဲနဲ့ပေါက်လိုက်တာ ခေါင်းထိသွားလို့ ဆေးရုံတင်ထားတာတဲ့။ အဲလို ကြားရတော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ ဒါနဲ့ဒီမနက်ရုံးရောက်လို့ ဂေးဇတ်ရွာကိုဖွင့်ပြီး ကိုယ်ရေးခဲ့ တဲ့ပိုစ့်တွေပြန်ဖွင့်လို့ ဆွေးနွေးအကြံပေးတဲ့၊ဆုံးမတဲ့ ကွန့်မန့်လေးတွေပြန်ဖတ်တဲ့အခါ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ရဲ့ကွန့်မန့်တစ်ခုမှာ ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်မှအားမနာ အဆဲလေးနဲ့ကွန့်ထား တာဖတ်မိလိုက်လို့ အခု ဆဲလည်းဆဲနိုင်ကြပါပေ့ ပိုစ့်လေးရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒီပိုစ့်လေးဖြစ်မြောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဂေးဇတ်ရွာသားတစ်ဦးကိုရော ပန်းရံဆရာကိုရောကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ ပန်းရံဆရာတစ်ယောက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ရင်းနိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
ဂေဇက်ထဲက လိင်တူချစ်တူကြီးလဲ ဘယ်နေ့ခေါင်းပေါက်ပြီး ဂန် ့မလဲမသိဘူး..
ကျော်ကတော့ သံခမောက် ဆောင်းပြီးမှ ဆဲတာ..အေးရှေးဘဲ
ဆဲတဲ့ကောင်နဲ့ စိတ်တိုတဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ ကြွသွားတာပေါ့။ ဆဲတပ်ရင် အရှောင် အတိမ်းလေးပါတပ်ဖို့ လိုနေပြီ :-)
အဖေက သားကိုဆဲတာ တဲ့( မအေပေးကောင်)….ထို့ကြောင့် ချစ်စရာကောင်းအောင် ဆဲတတ်ရန်လိုပါ၏။ မဆဲတတ်ပါက သူကြီးပြောတဲ့ ဆဲနည်းှဋီကာကို ပြန်ရှာ၊ ရွေးထုတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဆဲတတ်ရန် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်လှပါကြောင်း အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါသည်။
အကျင်.ပါလို. ဆဲတာဆိုပေမယ်. အဆဲခံရတဲ.သူက စိတ်အခန်.မသင်.တဲ.အချိန်နဲ.သွားကြုံရင် အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ.။
မုဆိုးနားနီး မုဆိုး၊တံငါနားနီး တံငါပေါ့ဗျာ။
အင်း သိပ်တော့ မနီးစေနဲ့ ကိုယ့်လူ ၊ ရောနှောပါသွားပါဦးမယ် ၊
စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ မကပ်ရင် ခပ်ခွာခွာနေ ၊
တချို.က အားနေရင် ထိုင်ဆဲတတ်တယ်ဗျ၊ ခင်တဲ့လူကိုတောင်မှ စသလိုနဲ. ဟို မအေ… လာဦး၊ အဲလိုတွေ ခေါ်ပြောကြတယ်၊ ကောင်းပါဘူးဗျာ
ဆဲတယ် အသုံးအနှုန်းကို မသုံးတာကအကောင်းဆုံးပဲ